Qaaddi Anthony Kennedy ayaa soo saaray amarkan ku meel gaar-ka ah, Isniintii, waxana uu ka dalbaday dadki dacwada ka keeney in ay ka soo fal-celiyaan illaa gelinka hore ee Talaadada maanta.
Maxkamadda sagaalaad ee Racfaanka, ayaa Isbuucii hore xukmisay in qaxootiga qaar ay soo gali karaan Mareykanka haddii hay’ad dib u dejineed oo gudaha Mareykanka joogta ay kiiskooda aqbasho. Arrintaasi oo haddii ay ku guuleysan lahaayeen u suuragalin laheyd in ay waddanka soo galaan 24 kun oo qaxooti ah.
Balse wasaaradda caddaaladda, ayaa arrintaasi dacwad ka geysay Maxkamadda sare, Isniintii.
Madaxweyne Trump ayaa amar madaxweyne oo uu soo saaray bishii March ee sanadkan, waxa uu xanibaad ku soo rogay muwaddiniinta ka imanayay dalal Muslimiin u badan oo lix gaaraya, kuwas oo kala ah Iran, Siiriya, Libya, Soomaaliya, Sudan iyo Yemen in ay 90 cisho in ay waddanka soo galaan, isagoo joojiyay muddo 120 beri barnaamijkii dib u dejinta qaxootiga ee Mareykanka.